သို့/ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ... Read more
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် (သောကြာနေ့) နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၂း၃ဝ အထိ၊
ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅)... Read more
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ဝါသနာရှင်အသင်းများမှ ကြီမှူး၍ Myanmar ICT... Read more
MCPA Certified Fundamental Software Engineer Exam Result List (20th December, 2009) Sr. Roll. No Center Name... Read more
Seminar @ “Global Data Center”
Seminar Title : “Global Data Center”
Date and Time : ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ နာရီအထိ၊
Venue : ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်... Read more
Deepest sympathy to Sayar U Thaung Tin
MCPA အသင်း၏ နာယက၊ MCF (မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး
ဆရာဦးသောင်းတင်၏ ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက်
MCPA အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ မိသားစု... Read more
Pre Selection List for Japan (10) Days Trip
ဂျပန်နိုင်ငံ (၁၀) လေ့လာရေးအစီအစဉ်အတွက် MCPA မှ အောက်ပါ အသင်းသားများကို ပဏာမရွေးချယ်လိုက်ပါသည်။ ယင်းအသင်းသားများ၏ အသေးစိတ် ကိုယ်ရေးရာဇ၀ယ်များကို ဖြည့်စွက်စေကာ သက်ဆိုင်ရာ ဂျပန်အဖွဲ့အစည်းသို့ သံရုံးမှ... Read more
Search Engine Seminar & WorkShop
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီမှ ၅း၀၀ နာရီအထိ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅) တွင်... Read more